चित्त दुख्नु हृदयघात बराबर हुन्छ ? - Birgunj Sanjalचित्त दुख्नु हृदयघात बराबर हुन्छ ? - Birgunj Sanjalचित्त दुख्नु हृदयघात बराबर हुन्छ ? - Birgunj Sanjal
चित्त दुख्नु हृदयघात बराबर हुन्छ ?
२ आश्विन २०७६, बिहीबार ०७:५९
एजेन्सी । एक अध्ययनका अनुसार कुनै पनि मानिस एक भावनात्मक चरणबाट गुज्रिदै गर्दा ऊ अधिक तनावको शिकार हुने गर्दछ जसपछि सो व्यक्तिमा हृदयघातको लक्षण देखा पर्न थाल्छ । यसैले पनि अनायासमा कसैको मन दुखाउनु भनिएको छ किनकि वास्तवमै दुःखी मनले मुटुमा गम्भीर असर गर्न सक्ने बताइएको छ ।
यसरी मन दुखेपछि अचानक मुटु कमजोर हुने र मुटुले काम गर्न छाड्नुलाई अत्यन्तै वैज्ञानिकहरुले समेत असामान्य र दुर्लभ मान्ने गरेका छन् । तरपनि यसबाट मृत्यु हुने सम्भावना भने कम रहेको छ । यस्तोमा ब्रोकन हर्ट सिन्ड्रोमलाई समयले मात्र ठीक गर्न सक्ने डाक्टर सेगल बताउँछन् । दुःखी भएका बेला भावनात्मक समर्थन सबैभन्दा उपयुक्त हुने र केही दिनदेखि केही हप्तासम्ममा ठीक हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।